DHIB UMA ARKO IN AAN MARAYKANKA ISKAASHANNO SIDII LOO TIRITIRI LAHAA ARGAGIXISADA. WAAYO AYAGOO BADANNA AYEY JOOGAAN DHULKEENNA.
Madaxweyne C/Laahi Yuusuf Axmed ayaa waraysi siiyey jariiddada Dar-Al-hayat intii uu joogay Adis Ababa. Wuxuu bixiyey waraysi dhinacyo badan taabanaya. Mar wax la weydiiyey Muqdisho matagaysaa? Wuxu ku jawaabay. Hawlo adag ayaa nahoryaala, anagoo banaanka joognana waxba kama qaban karno. Xamarna suuragal nooma'ahan inaan tango iyadoon la xaqiijiyo xasilooni iyo nabadgalyo. Waxaan awoodnaa inaan gobol kale ka bilowno hawlaheenna, maxaa yeelay Soomaaliya Muqdisho kaliya ma'ahan.
Waxaa la weydiiyey ma Puntland ayaad geyneysaa maamulka dowlada? Wuxuu yiri. Suuragal ma'ahan inaan dowladda u raro halka aan ka soo jeedo, laakiin meel kale ayaan dooran doonnaa.
Mar wax laga weeydiiyey xiriirka uu la yeelanayo Somaliland wuxuu yiri. Wax qulqulato dagaal ah lama gali doonno, wakhtiga ay munaasab noqoto ayaanna lasugaynaa inaan wadahadal toos ah la galno. Wuxuu intaas raaciyey, marna uma isticmaali doonno awood kuwa naga soo horjeeda iyo kuwa markaan tartamayeyba imucaaradasanaa. Wax kasta oo suuragal ah ayaan samayn doonaa si aan shacabka taageero buuxda uga helo. Waxaana rabaa inaan usoo celiyo wixii ay waayeen 14.sano oo ah nabad iyo daganaasho.
Mar uu ka hadlayey xiriirka uu la leeyahay dowaladda Maraykanka wuxuu yiri. Wuu wanaagsan yahay, waana la shaqayn doonaa cid kasta oo Soomaaliya wax ka dhisaysa. Isaga oo Argagixisa ka hadlaya wuxuu yiri. Waxaanu nahay dadka uu dhibka ugu badan ka soo gaaro Argagixisada, gaar ahaan iyadoo ay dhulkayaga joogaan tiro aad u badan oo Argagixiso ah. Waxaana dareensahay ayuu yiri. In Maraykanku uu hogaaminayo weerarka lagu hayo ladagaalanka Argagixisada Caalamka. Mana jiraan wax noo diidaya inaan iska kaalmeysanno sidii aan uwada tir-tiri lahayn argagixisada handadaada ku haya gobolka iyo dunida oo dhanba.